Photoshop for iPad wuxuu ku dari doonaa taageerada RAW | Wararka IPhone
Photoshop -ka iPad wuxuu ku dari doonaa taageerada RAW
Markaan ka hadlayno sawir qaadista, adeegsiga qaabka RAW waxay u oggolaaneysaa in sawirrada lagu kaydiyo suurtagalnimada wax ka beddel qiimaha loo isticmaalay qabashada, taas oo noo oggolaanaysa inaan wax ka beddelno si ay ula jaanqaadaan waxa aan rabnay inaan qabsanno haddii natiijada hore aysan ahayn tii la rabay.
Photoshop -ka PC -ga iyo Mac -ga ayaa ah codsiga ugu badan ee loo adeegsado tafatirka sawirrada oo aan ku awoodno la shaqee faylasha qaabka RAW iyadoon wax xaddidan lahayn. Si kastaba ha ahaatee, nooca iPad -ka ee Photoshop ma taageerayo qaabkan, ugu yaraan muddo gaaban.
Adobe ayaa ku dhawaaqday in Photoshop -ka iPad -ka uu ku dari doono cusboonaysiinta mustaqbalka Taageerada faylka RAW, kaas oo u oggolaan doona dadka isticmaala inay ku shaqeeyaan sawirro cayriin ah, maadaama lagu muujiyey shaashadda aaladda qaadaysa. Photoshop wuxuu taageero ka siin doonaa qaabka DNG ilaa Apple ProRAW.
Laga soo bilaabo DNG ilaa Apple ProRAW, adeegsadayaashu waxay awoodi doonaan inay soo dejiyaan oo furaan feylasha RAW kaamerada, waxay hagaajiyaan sida soo-gaadhista iyo buuqa, iyo sidoo kale inay ka faa'iidaystaan ​​tafatirka aan burburka lahayn iyo hagaajinta otomaatiga ah ee faylasha cayriin, dhammaantood iPad-ka.
Faylasha RAW ee Kaamerada si fudud ayaa loo hagaajin karaa duulimaadka iyo waxaa loo soo dhoofiyaa sida ACR walxaha caqliga leh. Habkani wuxuu u oggolaanayaa adeegsadayaasha inay feylkooda tafatirka ah ku furaan Photoshop -ka Mac ama Windows oo ay wali heli karaan faylka cayriin ee ku jira iyo wixii hagaajin ah ee lagu sameeyay.
Fiidiyowga soo socda, ragga Adobe ayaa na tusaya sida muuqaalka Adobe Camera RAW uu ugu shaqeyn doono Photoshop -ka iPad -ka.
Wixii ku saabsan taariikhda siideynta shaqadan cusub, xilligan aan la garanayn, sidaas oo kale ayaa la bilaabay dhawr toddobaad oo soo socda sannadka soo socda. Si loogu isticmaalo Photoshop -ka iPad -ka, waxaa lagama maarmaan ah in la bixiyo rukhsad bille ah, maadaama Adobe aysan soo bandhigin suurtogalnimada ah inay ku heli karto dalabka hal lacag bixin, taas oo shaki la'aan dhiirrigelin doonta adeegsiga arjiga dhexdooda isticmaalayaasha iPad -ka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPad » Photoshop -ka iPad wuxuu ku dari doonaa taageerada RAW
Tiny Wings + waxay noqon doontaa cinwaanka xiga ee ku soo degi doona Apple Arcade
Apple waxay bilawday betas afaraad ee soosaarayaasha macruufka 15.1 iyo inta kale ee nidaamyada hawlgalka